Pọtụfoliyo Millionaire | Chlọ Franchise Dabere na Home | Franchiseek
»Ohere ndi Franchise»Pọtụfoliyo Millionaire
Ihe omuma a di ike enyerela otutu puku aka iwulite akwukwo ihe ngosi nke $ 1,000,000 nke oma na £ 50,000 na ego nnabata nzuzo na ndu - ugbu a, I gha eme otu ihe.
Maka ndi choro iru ala nke ihe Sistemụ Akụ Akụkụ Nzuzo - Ọ bụ Ihe You maghị Nke Na-akpata Gị Akụ!
Kama, Could nwere ike Building na-ewu ebe a na-agafe ego
Ego mbata nke ga –ebi na ndu gi….
-enweghị £ 50,000 ka £ 100,000 echekwara echekwa
-enweghị jiri ọtụtụ afọ na-ewu Pọtụfoliyo ụlọ na azụmahịa ndị metụtara ya
-enweghị ihe omuma ma obu ihe omuma banyere ulo oru
Ihe mmemme Pọtụfoliyo Millionaire nyeere m aka iru ebe m na-akwụ ụgwọ ebe a na Crewe ma ugbu a azụtala ndị ọchụnta ego dị ka ha gosipụtara, nkwekọrịta ọ bụla m zụrụ azụ emeela £ 5,000 na ụgwọ-ego gosipụtara uche na-akụ ụzọ anyị ga-esi ere ahia anyị enweghị ma nwee ike. na-eme azụmahịa ndị a site na ebe ọ bụla. Onye ọ bụla kwuru na ịchọrọ ego iji banye n'ụlọ, nke a bụ ụgha!
'Anyị hibere na United States ma chọọ iwu ụlọ akụ na-ahụ maka ụlọ ọrụ UK yana azụmahịa azụmaahịa, ebe anyị na-eme njem ọtụtụ anyị chọrọ ijide n'aka na anyị nwere azụmahịa ahaziri nke dabara na ụdị ndụ anyị dịka anyị hụrụ ọtụtụ azụmahịa ị. naanị ịzụrụ ọrụ ọzọ-Ngwongwo dị iche iche ka ịnwere ike nweta ego na-akwụ ụgwọ kwa ọnwa. Anyị na-enwe nkụda mmụọ na ohere dị ebe ahụ iji nweta ego mana anyị nwere mmetụta na anyị nwere mmasị na ihe onwunwe ma na-adọta ya mgbe ahụ anyị hụrụ Portfolio Millionaire system yana dịka ọ gosipụtara na-enye ohere nnwere onwe, akụnụba ma enwere ike ịgba ọsọ site na ebe ọ bụla ụwa!
Richard na Alison Mapp Crewe
Youchoro Could nwere ike ibu ihe nnweta?
Ọ bụrụ na ọ ga-amasị gị ịkọwa otu ihe nzuzo kacha mma Ndi Britain mara amara, mgbe ahụ mee ka anya gị legide anya na ibe a. Gi ike chọta ozi a ebe ọ bụla ọzọ na ntanetị.
Maka na ụlọ ọrụ akụrụngwa achọghị ị ịchọpụta - ha achọghị onye ọ bụla na-ewere iberi achịcha ahụ ha nwere ike idobe ha niile kama!
Ihe m choro ka gi na gi ga - emebi ihe nkpuchi ufodu - ma ekwere m na onye obula nwere ịnụ ọkụ n'obi na ọchịchọ mee nke a ego dị mfe ịrụ ọrụ maka ha kwesịrị ohere a.
Nke a Bụ Ihe Gị n'ezie Chọrọ - Ọ bụrụ n’eziokwu
Nke mbu, ka anyi doo anyi ihe mgbaru ọsọ # 1:
Chọrọ ịmalite ịnụ ụtọ akụ na ụba gị na nnwere onwe pụọ na nsogbu nke agbụrụ o na-eweta.
Ugbu a, ị nwekwara ike ị nụ ọ sharingụ na ị na-eketa uru akụ na-ere ahịa na elu 5% nke Sunday Times Ọgụrụ List nwere…
… Ka ị na-esi ebe ọ bụla n'ụwa rụọ ọrụ dị ka onye isi gị, na-ekpori ndụ mgbe niile iji nwee ọ enjoyụ na njem gị na-esote ala dị anya ...
… Na ikekwe oburu n’inweta nchebe na - echekwaba ụmụ gị na ụmụ ụmụ gị n’ọdịniihu - ma Brexit mezuru ma ọ bụ na ọ gaghị.
Enwere nde Millen 750,000 na Britain: Soro Ha!
Na-achọ ịchọpụta a egosi usoro nke ahụ enyerela ọtụtụ puku mmadụ aka dị ka gị ịchọpụta usoro akụ na ụba na-enweghị nchekasị nzuzo inyere ndi ozo aka ire ahia - ma tinyezie ego ahụ!
Ndị a si ụzọ ndụ niile - ma ọ bụghị ya bụ ngaji ọla ọcha n’ọnụ ha.
Nke ọzọ Ihe ha keta bụ na ha niile nwere enweghị ahụmịhe na azụmaahịa tupu ịbanye na usoro na ọzụzụ Ngwongwo Millionaire.
Nke a bụ a ike na ịtọhapụ ohere azụmaahịa nke ahụ ga - enye gị ọzụzụ niile ịchọrọ iji azụmaahịa na a ọkachamara, ụkpụrụ na iwu iji obi ike zuru ezu.
Na azụmaahịa akụrụngwa ịbụ a kacha nta nke £ 3,000 na ihe ruru $ 5,000, naanị otu nkwekọrịta n'otu ọnwa nwere ike inye gị ezigbo ego n'ego.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ohere ga-enye gị oge efu ka ikwesiri tinyere nnweta akụ na ụba na-akwụ ụgwọ iji kporie ya, mgbe ahụ ihe onwunwe bụ naanị viable atụmatụ n'ime United Kingdom taa.
Naanị jụọ ndị 750,000 ihe onwunwe nde ndi n’enwe ugbua ibi ndu ha.
Mepụta ego ị ga - eji echekwa “dị ka ụlọ” - enweghị ihe ọ bụla
Ngwongwo Ngwongwo bu ihe ahia nke nwere otutu ulo na ewulite akụnụba site na izu na ire ihe. Ahịa ụlọ na-aba ụba gburugburu ụwa - na Britain adịghị iche.
Companylọ ọrụ ahụ na-achọ ndị dị ka gị bụ ndị dị njikere na-achịkwa ndụ ha ma wulite echiche ha banyere nnwere onwe ego, nke ndị uru di elu, ihe nlere di ala nke ihe ahia.
a ọzụzụ sara mbara na agụmakwụkwọ ọkachamara ga-egosi gị otu ị ga - esi:
Rụpụta Pọtụfoliyo nke ruru nde pound ị na-enwetara ego ị na-eji abanye n'ụlọ akụ kwa ọnwa
Chọta na ahia a na-azụtara ndị na-etinye ego maka ihe ruru £ 5,000 ọ bụla, na-egosi gị otu esi achọta ma họrọ azụmahịa kacha mma
Kụziere gị ihe niile ịchọrọ ịma banyere azụmaahịa akụ na usoro ziri ezi na usoro iwu iji nweta aha njirimara ngwa ngwa
Zụọ ma melite gị na atụmatụ ọgbara ọhụrụ iji mee ka nghọta gị na uru gị dịkwuo elu, agbanyeghị nkwekọrịta ọ bụla
… Na ọtụtụ ihe!
Nke a bụ a ohere pụrụ iche ibu ihe ọkachamara na-ahụ maka ihe gbasara akụ na onye na-etinye ego na- Pọtụfoliyo nkeonwe na nhatanha - sonyekwa na ndị ọnụ na-eru n'okwu na mba Britain taa.
Ego Ole Ka Ka Oge Gị Dịre Gị?
Kwa izu, kwa ọnwa, na kwa afọ, awa ole ị na-eji arụ ọrụ iji wee gbakwunye mmiri na-aga n'ihu. Oge awa ọ bụla bụ awa site na ezinaụlọ gị, ndị enyi gị, n'ihe omume gị - na gị ndụ.
See hụrụ, ndị niile nọ na Britain na-enweta akụ na ụba site na iji usoro a - ọ bụghị oge i mere, onwe gị?
Chee, maka nwa oge, na ọ bụ afọ site taa. Kedu ka ị na-eme? Cheta - oburu n’iru n’iru dika odi ugbua, gi ga- nweta otu ihe si na ya pụta.
N’afọ ahụ - mụ nkwa Gị nke a - ga-agafe n ’ọkụ.
Echere m na nhọrọ gị doro anya.
Mee Ugbu A Ka Bido Na Ndụ Ahụ Des Chọrọ
Ngwongwo bụ otu n'ime itinye ego kachasị nchebe ị nwere ike ịme na ndụ gị - nke a bụkwa ohere nke ndu iji nweta ọzụzụ niile ịchọrọ iji mee nke a maka gị na ezinụlọ gị taa.
Were nzọụkwụ mbụ na nke a njem na-agbanwe ndụ taa site na mejuputa akwukwo taa: obu oge ibido ndu gi!